Rayson | UKurlon Dewity Top
Ngamandla aqinile we-R & D kanye namandla okukhiqiza, amaRayson manje asephenduke umenzi wobungcweti kanye nomhlinzeki onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu kufaka phakathi i-Kurlon Desive Top akhiqizwa ngokususelwa ohlelweni oluqinile lokuphathwa kwekhwalithi namazinga aphesheya. I-Kurlon Desire Top St Isetshintshela kakhulu kuMkhiqizo R & D, ophendukayo ukuthi aphumelele ukuthi sithuthukise iKurlon Desive Top. Ukuthembela kubasebenzi bethu abasha nabasebenza kanzima, siyakuqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, izintengo ezinhle kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Uyemukelwa ukuxhumana nathi uma unemibuzo.rayson Kurlon Desive Top idlulise ukuhlolwa kokusebenza. Kuhlolwa ngokwemibandela yokuthunga, ukwakhiwa, ukunxenxa, imibala, nokuqina.